Ifakwa njani iPeyinti yokuKhusela iPeyinti? -Iindaba zeNkampani-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Ukuba uza kufaka iPPF, kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo-kodwa nokuba ukhetha yiphi, yiyo uhlala ungumsebenzi oqeqeshiweyo. Uninzi lwabafakeli be-PPF abaqeqeshiweyo bakwasongelwa i-vinyl okanye iinkonzo zesiko lokuqhuba. Iinkampani ezinkulu zisebenzisa umatshini obizwa ngokuba ngumcebi-okwenyani ukusika i-vinyl kumacandelo enza ukufakela kube lula kwaye kulunge.
Nangona kunjalo-uninzi lweenkampani zobuchwephesha zokufakelwa kwe-PPF ziyanyanzelwa ukuba zisebenzise umqulu omkhulu wefilimu, edibanisa inkqubo yofakelo kwaye ikhokelele kwizinto ezininzi ezimoshakeleyo. Inkqubo yofakelo ihlala ikhethekile kwaye ilungelelaniswe ngokusekwe kwifilimu okanye kukhuseleko lwepeyinti; njengoko umenzi ngamnye eneenkqubo ezahlukeneyo abazicebisayo.
Ngokubanzi, ukufakwa kwe-PPF kulandela la manyathelo:
Coca kwaye ulungiselele umphezulu. Uninzi lwabafaki basebenzise iarhente elungileyo yokususa inkunkuma, kodwa bangayisusi i-wax okanye ipolishi. Ngapha koko, ezinye ziya kugqiba i-wax eneenkcukacha kunye nepolishi ngaphambi kokufaka ukuphucula ukukhanya.
Sika izinto zePPF ukuze ulingane namacandelo. Nje ukuba ipeyinti yemoto ilungiswe, umfakeli uya kuyisika impahla ye-PPF yofakelo. Kuyafana noyilo kwifestile ye-tint. Uninzi lwexesha, baya kufaka kumacandelo, anjenge-hood, iipaneli zerocker, ipaneli yekota, izibuko ezisecaleni, umnyango, okanye elinye icandelo elingaphantsi kweenyawo ezintlanu. Emva kokuba besikile ifilimu, baya kuyidibanisa kwaye balungiselele ukufakwa.
Spray isisombululo esifanelekileyo. Ukufakelwa kwe-PPF kufuna into evumayo- ebizwa ngokuba sisisombululo esifanelekileyo. Oku kuvumela i-PPF ukuba isebenze into efana ne "glue-like", yiyo ke leyo ebangela ukuba ibambelele kumphezulu wepeyinti. Kwakhona, kuxhomekeke kuphawu lwe-PPF, isisombululo esifanelekileyo sinokuhluka ukusuka emanzini alula ukuya kwinto efana nesepha.
Ukulinganisa kunye nokufaka isicelo. Kulapho amava aya kudlala khona. I-PPF ayihambelani ngokuchanekileyo xa isetyenziswa. Ngapha koko, kunzima kakhulu ukuyifaka kune-vinyl. Inkqubo yokufaka i-PPF ibandakanya uthotho lokutshiza-i-squeegee-kunye nokuhambisa i-PPF. Xa ikwisikhundla esifanelekileyo, i-installer iya kusebenzisa i-squeegee ukususa amaqamza okanye ii-creases kwifilimu.
Ukoma. Nje ukuba i-PPF isetyenzisiwe, kwaye onke amaqamza kunye neentsimbi zihambile, inyathelo lokugqibela lokomisa okanye ukwenza ubushushu. Basebenzisa umpu wobushushu kwimizi-mveliso owenza ukuba kubambelele kwaye kubangele ukuba iPPF inamathele emzimbeni. Iyancipha umbandela kwaye idale ukulingana okuqinileyo.